I-Free Shipping Yomhlaba Wonke - I-Free International Delivery - WoopShop
IWoopShop.com iyaziqhenya ngokunikeza ngemisebenzi yokuthumela yamahhala yomhlaba wonke esebenza njengamanje emazweni angaphezu kwama-200. Akukho lutho olubaluleke kakhulu kithi ukwedlula ukuletha amakhasimende ethu inani elikhulu nensizakalo. Sizoqhubeka nokukhula ukuze sihlangabezane nezidingo zawo wonke amakhasimende ethu, siletha insizakalo edlula konke obekulindelwe noma kuphi emhlabeni.
Amaphakeji avela esigcekeni sethu eChina azothunyelwa yi-ePacket noma i-EMS kuye ngesisindo nosayizi womkhiqizo. Amaphakeji athunyelwa kusuka esigcekeni sethu sase-US athunyelwa nge-USPS. Ngakho-ke, ngenxa yezizathu zokuhlelwa, ezinye izinto zizothunyelwa ngamaphakeji ahlukile.
I-WoopShop ijabulela ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngokuthunyelwa mahhala kumazwe we-200 + emhlabeni jikelele. Noma kunjalo, kunezindawo ezithile esingakwazi ukuzithumela kuzo. Uma kungenzeka ukuthi utholakala kwelinye lamazwe sizoxhumana nawe.
Asinakho ukulawula amacala amasiko, Asikho icala lamanye amarekhodi uma izinto zithunyelwe njengenqubomgomo kanye nemisebenzi yokungenisa ihlukahluka kakhulu ezweni lonke. Ngokuthenga imikhiqizo yethu, uyavuma ukuthi amaphakheji owodwa noma amaningi angathunyelwa kuwe futhi angathola izimali zamasiko uma efika ezweni lakini.
Izindlela Zokuthumela Nezikhathi Zokuthumela
Yonke imiyalo yathunyelwa kungakapheli amahora angama-36 webhizinisi. Ukudiliva kuthatha izinsuku zebhizinisi eziyi-7-20 kanti ezimweni ezingavamile izinsuku ezingama-30 zebhizinisi.
Indawo Isikhathi Esilinganiselwe Sokuhambisa
I-united states Izinsuku zebhizinisi ze-7-20
YaseCanada, eYurophu Izinsuku zebhizinisi ze-10-20
Australia, New Zealand Izinsuku zebhizinisi ze-10-30
Mexico, eMelika Ephakathi, i-Ningizimu Melika Izinsuku zebhizinisi ze-15-30
Uzokwamukela i-imeyili uma imikhumbi yakho ye-oda equkethe imininingwane yokulandela umkhondo wakho, kepha kwesinye isikhathi ngenxa yokulandela mahhala ihhala ayitholakali Kwesinye isikhathi ama-ID okulandela umkhondo athatha izinsuku ezingama-2-5 zebhizinisi imininingwane yokulandelela ukuvuselela ohlelweni. Uma udinga eminye imininingwane, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi futhi sizokwenza konke okusemandleni ukukusiza ukuphuma.